Kedu ka anyị ga - esi mepụta redlinks dị mfe na 2019?
Nchọpụta njinarị nke search pụrụ ịbụ ihe siri ike ma na-atụ egwu, karịsịa maka ndị ọkachamara na-eto eto na-enweghị ahụmahụ ọ bụla. Nke a na-agụnye ọtụtụ njikarịcha usoro, ọnụ ọgụgụ, ngwaọrụ, mmemme na algorithm mmelite. Ọzọkwa, azụmahịa dijitalụ abụghị ụlọ ahịa ahịa. Akwukwo ndi ozo di iche iche n'eme kwa ubochi, o bu ihe mgbagwoju anya ma ndi okachamara ka ha jikota ozi obula. N'agbanyeghị nsogbu niile a, enwere ụzọ dị mfe iche banyere SEO. Usoro a nwere ihe ato nwere njikọta na njikọ nwere njikọ nke na-eme ka okporo ụzọ. Ihe ndị a na-agụnye - ọdịnaya, njikọ inbound, na mgbasa ozi mmadụ. Na-eme usoro ndị a kachasị mma n'ụzọ ziri ezi, ị ga-enweta nkwado azụlinks na 2019. Okwesiri ka i leba anya n'ihe omumu ato a dika odi ha mkpa maka igba ozo SEO ga-aga nke oma. Ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ dịkarịa ala otu nyocha kachasị mma, ị ga-ejedebe na peeji nke 10 nke Google SERP nke nwere oke ọfefe okporo ụzọ.
Tupu anyị amalite ikwu okwu banyere isi ihe atọ a, e nwere ihe ole na ole ị ga-aghọta banyere otu ha si arụ ọrụ na mgbagwoju anya.
SEO njikọ njikọ
Ọ dị mkpa inwe ọdịnaya, backlinks na mgbasa ozi ọha na eze dịka na mgbagwoju anya ha na-emepụta ihe nlekota nke ọma. Iji mee njirimara kachasị mma na ebe nrụọrụ weebụ, ị pụghị ịhapụ otu n'ime ihe ndị a dịka ịme usoro nyocha kachasị mkpa ịchọọsi ike na nke ọ bụla n'ime mpaghara atọ ndị a. Ọzọkwa, onye ọ bụla n'ime ndị a isi SEO components na-ewusi ndị ọzọ. Ọ bụrụ otu mpaghara, e. g. , e meelarịrị ọdịnaya n'ụzọ ziri ezi, ihe abụọ ọzọ (backlinks na mgbasa ozi ọha na eze) ga-akacha ewetara gị ebe nrụọrụ weebụ.Ime nyocha kacha mma n'ime search engine bụ ụbụrụ nke ọrụ ndị na-esote ma na-eche echiche. Ị nweghị ike ime mkpirisi ọ bụla na mgbasa ozi kachasị mma n'ihi na ọ na-akpata mmetụta dị njọ na ebe nrụọrụ weebụ gị SEO ma bibie mgbalị gị na mpaghara ndị ọzọ kachasị mma. Ọ dị mma, ị nwere ike ịtụrụ aka na ndị ọkachamara na SEO. Ma ndị ọkachamara SEO na ndị nwe ụlọ nwere ike inyere gị aka izute ihe mgbaru ọsọ gị.
Ya mere, ka anyị tụlee akụkụ atọ SEO ndị dị oke mkpa maka inweta nkwụnye azụ azụ na 2019.
Ọdịnaya bụ isi ihe mbụ nke mgbasa ozi kachasị mma ka ọdịnaya ka bụ eze. Ọ na-emetụta ahụmahụ onye ọrụ na saịtị gị na-egosipụta ọrụ gị na ụlọ ọrụ ahụ. Mkpokọta weebụsaịtị nwere ọdịnaya na naanị engines na-achọ ihe, a na-akpọ ọdịnaya a ọdịnaya meta. Ọ bụ ya mere ị ga-eji jide n'aka na ọ bụghị naanị na ịmepụta àgwà dị mma ma na-eme nchọpụta kamakwa ị ga-ebuli gị metadata dị ka URLs, utu aha, nkọwa, edemede na robots. txt.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịnwe ebe nrụọrụ weebụ a makwara nke ọma na nke a haziri nke ọma, ị gaghị eme njikwa njikarịcha search engine.Otu blog nwere ike inye aka na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ana m adụ gị ọdụ ka ị ghara ileghara blog anya dịka ọdịnaya dị mma na-adọta ndị ọrụ si chọọ ma mee ka ha banyekwuo na peeji nke ibe gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ ezigbo blogger na-adọta ndị ahịa ọhụrụ na ibe gị, ị ga-agbaso usoro ndị ọzọ:
Na-aga n'ihu ịmepụta ihe ọhụụ
Ịkwesịrị ịmepụta isiokwu ọhụrụ na ibe weebụ gị iji gosi engines ọchụchọ na ebe nrụọrụ weebụ gị nọ n'ọrụ ma dị ndụ. Ugboro ugboro, emelitela blog gị, nzaghachi ka mma ị ga-esi na Google. Ọ bụ ya mere ị ga-eji tinye blog gị ọhụrụ.
Nye ndị ọrụ nwere data bara uru
Ihe ịga nke ọma blog gị dabeere na ọnụ ọgụgụ ndị na-agụ akwụkwọ gị. Ọ bụ ya mere ị ga-eji na-elebara àgwà nke ọdịnaya ị na-ebipụta na blog gị anya. Ndị ọrụ anaghị achọ iji oge ha agụ akwụkwọ abụghị ihe dị iche iche na-adịghị mkpa na ọdịnaya dị ala. Ikwesiri itinye ha na ihe di iche na ihe di iche. Ihe omuma gi kwesiri idi nma ka ndi ozo gua ya.
Usoro njikọ ụlọ na-agụnye ịde blọgụ ndị ọbịa, ntọhapụ mgbasa ozi, nkesa, na njikọ ndị ọzọ ejikọta.
Njikọ njikọ dị ịrịba ama maka njikarịcha na nkwado gị dịka njikwa ọchụchọ na-amata ikike na saịtị gị nke ọma na-adabere na ụdị ebe nrụọrụ weebụ na-ejikọta gị. Ndị ọzọ na-ebutebe weebụsaịtị weebụ na-ejikọta gị, nke dị elu ị ga-agbadoo na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ. Iji nweta ihe nkwado sitere na saịtị ndị nwere ikikere, ịkwesịrị ịbụ ebe nrụọrụ weebụ dị mma na ọdịnaya dị mkpa ma dị mkpa na ndị ọrụ.
Ịchọta ebe nrụọrụ weebụ nwere ikikere dị na niche gị, ịkwesịrị ịmepụta nchọpụta ahịa ma chọpụta blọọgụ na weebụsaịtị ndị ha na-emetụta na nke gị ma kwe ka ndị na-ezite ndị ọbịa. Mgbe ahụ, ịchọrọ ịkpọtụrụ ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ ma jụọ ha banyere ohere njikọ maka gị. Jide n'aka na ị na-ewu njikọ njikọ dofollow naanị ụdị backlinks nwere ike iweta ihe njikọ bara uru na saịtị gị. Enweghị saịtị nwere ike ịga nke ọma n'ịchọpụta njikwa search ọ gwụla ma saịtị ndị ọzọ na-ejikọ ya.
Ka anyị tụlee ihe kacha mma ị ga-esi nweta akara azụ azụ na saịtị gị bụ:
Ịde blọgụ ndị ọbịa
Usoro otu ị ga - esi enweta nweta backlinks site na ịde blọgụ ndị ọbịa, akọwapụtara m na nke a n'isiokwu a. Ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka ịmepụta njikọ dị ka ọ na-adịghị eche nche site na engines ọchụchọ dị ka spam. Ọzọkwa, ọ bụ ohere dị mma iji soro ndị na-ege gị ntị kwurịta okwu ma na-adọta ndị ahịa ọhụrụ nwere ike ịmepụta gị.
Mgbasa ozi ntọala
Ịmepụta mkpọsa akụkọ bụ ụzọ dị mfe iji melite ọkwa gị na ịgwa ndị mmadụ banyere akwụkwọ akụkọ gị na mgbanwe gị. Ihe niile ị chọrọ bụ ịmepụta otu mpempe akwụkwọ ederede nke ọma na ihe omume na ụlọ ọrụ gị ma nyefee ya na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ntọhapụ.
Mepụta imepụta ọdịnaya
Otu ụzọ dị mma iji nweta ụdị ihe ọṅụṅụ dị mma bụ ịmepụta ihe bara uru nke ndị ọrụ ga-ekekọrịta na dị ka. Isi ihe ịga nke ọma bụ ịmepụta ihe ndị na-eme nchọpụta na-esote site na infographics na mgbe niile.
Dee aha na ndekọ aha mpaghara ma ọ bụ òtù ndị ọkachamara ahụ dịpụrụ adịpụ
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ịgbakwunye ebe nrụọrụ weebụ gị na ndekọ ụlọ ahịa dị ka ọtụtụ ndị na-enyocha òtù a choro site na ntuziaka ndị a. Njikọ sitere na isi iyi ọ bụla ga-enyere aka mee ka saịtị gị dị elu, ya mere echefula ohere gị. E nwere ọtụtụ ọrụ na weebụ nke na-enye ndị nwere ebe nrụọrụ weebụ ohere iji wuo njikọ site na isi akwụkwọ ndekọ mpaghara.
Nweta ndenye backowers gị
Ị nwere ike irite uru site na ndị na-ere ahịa niche ahịa gị nke na-azụ ahịa bụ ndị tinyeworị mgbalị n'ime njikọ njikọ. Nke mbụ, ịkwesịrị ịme nyocha ịsọ mpi ma chọpụta ndị na-agba nsị gị TOP5. Wee chọpụta njikọ ndị gị na-asọmpi nwere na ebe ndị njikọ ndị a si abịa. Chọta ndị asọmpi gị na-akwado ndị nyere gị ma jụọ ha banyere ohere njikọ maka azụmahịa gị.
3. Mgbasa mgbasa ozi
Iji na-arụsi ọrụ ike na mgbasa ozi ọha na eze bụ tiketi gị na ọkwa kachasị elu na SERP. Usoro mgbasa ozi na oge anyị bụ akụkụ dị mkpa nke njikarịcha search engine. Site na ntanetị mgbasa ozi, ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị ahịa gị ma mee ka ha nwee mmekọrịta enyi na enyi. Nanị inweta ọtụtụ mmasị na mbak nwere ike ịchọta ikike nke ibe, n'ihi ya, ọ na-adịkarị elu, na-eme ka ndị mmadụ nwekwuo ọhaneze.
Mgbe ị na-eduzi mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi gị, buru n'uche ndụmọdụ ndị a:
Ọ bụrụ na ị kwadoro akara gị na otu n'ime usoro ntanetị mgbasa ozi na-ewu ewu dị ka Google, Facebook ma ọ bụ Twitter, ịkwesịrị ịrụ ọrụ n'okpuru ya kwa ụbọchị. O zughi iziputa otu ozi otu ugboro n'izu ka ndi na esoro gi ga-agu ya ngwa ngwa ma mechie gi. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịga nke ọma n'àgwà egwuregwu, i kwesịrị inye ndị na-eso ụzọ gị akwụkwọ posts kwa ụbọchị banyere isiokwu ndị na-akpali akpali, nyocha, na asọmpi. Ịkwesịrị iji ụzọ niile nwere ike ịkpọtụrụ ndị na-ege gị ntị ma mee ka o guzosie ike n'akụkụ gị.
Chọta ihe niche nke mmadụ na-emetụta ụlọ ọrụ gị. N'ezie, ọ bụ MUST ịmepụta akaụntụ azụmahịa gị na Facebook, Instagram, na Twitter, mana nhazi ndị a bụ naanị pasent nke ebe nrụọrụ weebụ dị gị. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịchọ saịtị ndị ọzọ na-elekọta niche nke ndị ahịa.
Ihe atọ m kọwara n'isiokwu a (ọdịnaya, njikọ ụlọ, na mgbasa ozi mgbasa ozi) dị oké mkpa maka mgbasa ozi na 2019. SEO ihe ịga nke ọma ga-ekwe omume, ma ọ bụghị na-enweghị ihe ndị a dị mkpa dị ugbu a ma na-etinye aka n'ụzọ kwesịrị ekwesị. N'oge a, ọ na-esiri ike ịchọta engines na-eme egwuregwu na ịkwalite ọkwa gị na usoro aghụghọ ole na ole. Ọ bụ ya mere ị ga-eji tinye oge gị na mgbalị gị n'ịmepụta mgbasa ozi kachasị mma. N'ihi ya, ị ga-enweta nlọghachi dị elu na ego.
Ikwesiri inwe usoro siri ike maka mgbasa ozi kachasị mma gị ma wuo atụmatụ nke ga-adabere na ịmepụta njikọ ndị ọzọ site na isi akwụkwọ dị iche iche na niche gị, ịmepụta mma na ihe omimi nke ọchụchọ nke kachasị elu site na mkpa dị elu ederede, na n'ikpeazụ mepee mmekọrịta dị ike dị ka ego kachasị nke ndị ahịa gị nwere ike iji netwọk mmekọrịta kwa ụbọchị.
Ọ bụrụhaala na ị kwadoro na njirimara gị na ntanetị (ntanetị weebụ, ịmekọrịta, ahịa ọdịnaya, nchọpụta isiokwu, njirịta kachasị mma) na-agagharị nke ọma; ị nwere ngosipụta ụlọ ọrụ dị irè ma na-emeri ma na-akwalite ụdị gị na ntanetị mgbasa ozi, ị ga-aga nke ọma n'ịzụ ahịa n'ịntanetị Source .